Nagu saabsan - Dongguan Sunkia Makiinado Co., Ltd.
Mashiinadeenu waa kuwo caan ah oo qiimeyn sare ay ka helaan macaamiil fara badan oo gudaha iyo dibada ah.
Waxaan ku adkeysaneeyn mabaadi'da "Tayada, Kalsoonida, iyo Dareenka"Tan iyo markii la aasaasay sanadkii 2008. Dhab ahaantii hal-abuurnimo badan oo waawayn 12-kii sano ee la soo dhaafay waxayna noqotay sumcadda Shiinaha ee horseedda. Ganacsigeennu si isdaba joog ah ayuu u korayaa, tayadayada iyo adeeggayaguna waxay naga helayaan qaddarin aad u sarreeya oo naga timaadda macaamiisha Shiinaha iyo suuqyada caalamiga ahba. Hogaamiyaha qaybteeda wuxuuna u heellan yahay soo saarista tikniyoolajiyadda dahaadhka waraaqaha iyo qalabka ugu tayada sarreeya shirkado badan oo daabacan iyo shirkad dadweyne.
Waxyaabaheena ugu muhiimsan waa mishiinka OPP laminating mashiinka otomaatigga ah ee otomaatiga ah UV, mashiinka wax lagu duubo ee daaqadaha badan, xawaaraha sare ee mashiinka lagu duubo, mashiinka calendering xawaaraha sare, Qalabaynta iyo qalabka wax soo saarka sanduuqa hadiyadaha, iyo makiinadaha kale ee laxiriirta post-press. Aad ayaanu u aqoonsan nahay oo noo amaanay macaamiisha. Waa shirkadda hogaamineysa warshadaha baakadaha. Waqtigan xaadirka ah, shirkadeennu waxay dayactirtay iskaashi ganacsi oo wanaagsan oo lala yeesho dhowr shirkadood oo waaweyn oo daabacaadda gudaha iyo dibaddaba ah. Shirkadeena waxay raacdaa waxtarka maamulka, badbaadada tayada, iyo horumarka sumcadda, waxayna si firfircoon u horumarisaa tayada iyo qiyamka wax soo saarka, iyadoo loo hogaansamayo macaamiisha u janjeedha uguna guuleysto falsafada ganacsiga. Si diirran u soo dhawow inaad nala soo xiriirto oo aad na soo booqato. Mahadsanid.
Hadafkeenu waa inaan xallino alaabada baakadaha waraaqda ah oo aan u isticmaalno farsamadeena si aan u gaarno himilada noolaha u nugul / dib loo warshadeyn karo iyo ilaalinta deegaanka ee Cagaaran, taasoo saameyn ballaaran ku leh baakadaha iyo warshadaha daabacaadda mustaqbalka. Hadafkeenu waa bixinta mashiinada qurxinta dusha sare ee baakadaha, mashiinada qiimaha sare lagu daro, hal-abuurnimo isdaba joog ah, macaamil gaar ah, is-gaaritaan